Ampidiro ny fononteny iraisana ho an'ny fitaovana hatramin'ny efijery 6 "| Androidsis
Mount, ilay manana universal avo lenta ho an'ny finday hatramin'ny 6 ″
Francisco Ruiz | | hevitra
Androany aho te-hanolotra anao a Fanohanana manerantany afaka mitondra am-pitoniana ny terminal finday hatramin'ny efijery 6 ″, mitaingina tsara ary hita eo amin'ny fiaranay. Tsotra ny anarany tendrombohitra ary vokatra avy amin'ny orinasa izy io WinnerGear amin'ny famaranana kalitao avo indrindra sy mahavariana.
Ny Mount dia fononteny iraisana sy mirindra izany eo amin'ireo kalitaony marobe, dia misongadina ambonin'izy rehetra ny kalitaon'ny faran'ny farany ary koa ny rafitra fisotroana patanty ao anaty kaopy suction izay manome antsika fangejana tonga lafatra sy hentitra amin'ny fitaratra rehetra na varavarankelin'ny fiaranay.
Ahoana no ahitanao ny horonan-tsary mifikitra amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, fivoriambe dia tena tsotra azontsika an-tsaina izany satria ampy ny mametraka azy eo amin'ny volan'ny fiaran'ny fiaranay, amin'ny toerana mety indrindra amintsika ary sintomy ny levera-tendrombohitra ho an'ny kaopy fisotroana hisorohana ny vokany hisintona sy hihazona azy tsara.
Raha vao napetraka eo amin'ny toeran'ny fiara tiantsika indrindra, matetika eo amin'ny varavarankely eo aloha, na izany aza Izy io dia manana pad 3M manokana ahafahana mametraka azy amin'ny dashboard-n'ny fiara, azontsika atao, amin'ny alàlan'ny famongorana ny lamosiny fotsiny, ny fanitsiana ny fanohanana hampifanaraka ny fitaovana amin'ny toerana mety indrindra amintsika satria izy io afaka mihodina 360 degre.
Tsy misy fisalasalana Fanohanana manerantany ho an'ny finday hatramin'ny 6 ″ haben'ny efijery mety raha ampiasaina amin'ny tanana iray monja, na amin'ny fametrahana ny terminal eo amin'ny fanohanan'ny rubbery sy minimalist izay mamela malalaka ny keypad an'ny ankamaroan'ny terminal, ary ny fanesorana azy mora foana amin'ny fampiasana tanana iray.
Ny vidin'ny fivarotana an'ity fononteny ity dia $ 29,99 ary azontsika atao ny mahazo azy mivantana avy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy, oséa avy amin'ny pejy ofisialy WinnerGear.
ihany koa Ampiasainay mivantana any amin'ny Amazon Spain io ny 23,99 Euros ny vidin'ny fandefasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Mount, ilay manana universal avo lenta ho an'ny finday hatramin'ny 6 ″
Ao amin'ny amazona dia milaza fa hatramin'ny 5.3 santimetatra izany, hiasa amin'ny Note 3 ve izy io?
Ny andiana fahitalavitra Game of Thrones dia misy ao amin'ny Play Store avy amin'ny Telltale Games